Codsiyada Gawaarida Xashiishadda ee Shatiyadaha Loogu talagalay Illinois
Shatiga Gawaarida Cannabis ee Illinois
Muxuu sharciga cusub ee Illinois ka leeyahay Hay'adaha Gawaarida Cannabis ee gobolka gudahiisa?
Shatiga Gawaarida Xashiishka
Hay'adaha gaadiidka xashiishadda ayaa loo xilsaaraa inay qaadaan Illinois xashiishadda cannabis ama waxyaabaha cannabis ku faafa gudaha Illinois dhexdeeda. Hay'adahan waxaa looga baahan yahay inay ku qaadaan xashiishadda ama waxyaabaha cannabis-infused lagu geeyo xarunta wax-soo-saarka, milkiilaha waxsoosaarka, hay'adda mareykanka, ururinta fidinta, xarun tijaabinta, ama haddii kale sida sharcigu oggol yahay.
Maqaalka, waxaan ka wada hadli doonnaa waxaad u baahan tahay oo dhan si aad uga ogaato arrimaha ku saabsan Ururada Gawaarida Cannabis ee Illinois. Laga soo bilaabo helitaanka shatiyada, shuruudaha, iyo mamnuucista gaadiidleyda illaa cusboonaysiinta shatiyada.
Hay'adaha gaadiidka xashiishka ee Illinois ayaa u baahan rukhsad si ay u shaqeeyaan. Ruqsadyadan waxaa soo saaray Wasaaradda Dakhliga aan ka dambayn Julaay 1, 2020. Wasaaraddu waxay ku soo rogi doontaa arjiga sidii loo heli lahaa laga bilaabo Janaayo 7, 2020, iyo dhammaan ururada u baahan shatiyada liisanka ay lahaan doonaan illaa Maarso 15, 2020, si ay u sameeyaan codsiyada.
Intaa ka dib, ururradu waxay yeelan doonaan inta u dhaxaysa Janaayo 7 ilaa iyo Maarso 15 ee sannad kasta si ay u codsadaan. Hadana haddii maalmahan ay ku dhacaan usbuuc-dhammaad ama fasax, hay'addu waxay lahaan doonaan illaa maalinta ganacsiga ee ku xigta inay codsadaan.
Hay'adaha Gawaarida Cannabis waxaa looga baahan yahay inay soo gudbiyaan foomamka codsigooda liis elektaroonig ah. Foomka dalabka waa inuu ka koobnaadaa;
Faahfaahinta qaar looga baahan doono codsigan waxaa ka mid ah:
(1) khidmadda aan la celin karin ee $ 5,000 ama, wixii ka dambeeya Janaayo 1, 2021, qaddar kale sida uu dhigayo qaanuunka u dejiyey Wasaaradda Beeraha, in lagu dhigo Sanduuqa Xeerarka Cannabis;
(2) Magaca shirkada gaadiidka qaada;
(3) Cinwaanka jirkiisa ee shirkadda, haddii mid la soo jeediyo;
(4) Magaca, nambarka amniga bulshada, cinwaanka, iyo taariikhda dhalashada saraakiisha fulinta iyo sidoo kale xubnaha guddiga; mid kastoo ka mid ah markaas waa inuu ahaadaa ugu yaraan 21 sano;
(5) tafaasiisha habsocodsiinta maamul ama garsoor oo mid kasta oo ka mid ah saraakiisha fulinta ama xubin ka tirsan guddiga
(i) uu qirtay dambiile, xabsi, ganaax, ama
(ii) xubin xubin ka ahaa guddiga shirkadda ama urur aan macaash doon ahayn oo dambi galay, la xiray, la ganaaxay, ama laysanka lagalaalay ama laga joojiyay;
(6) qawaaniin la soo jeediyay si loo maareeyo shirkada ay ka mid yihiin; qorshe sax ah oo loogu keydiyo buug-kaydinta, nidaamka shaqaalaha, iyo istiraatiijiyad amni oo ay ansixiyaan waaxda booliiska Gobolka iyo mid la jaan qaadaya xeerarka ku xusan Xeerkan. Shirkadaha gaadiidku sidoo kale waa inay sameeyaan usbuuc usbuuc.
(7) xaqiijinta baaritaanka amniga ee lagu sameeyay xubnaha shirkadda.
(8) Nuqul ka mid ah sharciga degenaanshaha maxalliga ah ee hadda jira si loo tuso shirkadda oo dhan dhammaan xeerarka maxalliga ah ee la aasaasay.
(9) soo jeedinta shuruudaha shaqaalaynta si loo muujiyo ku lug lahaanshaha dhaqamada shaqaalaha ee cadaaladda ah, iyo
(10) bal in codsaduhu muujin karo khibrad ama dhaqangelin ganacsi oo kor u qaadaya awood-dhaqaale ee Aagagga Saamaynta Awoodda leh u Leh;
(11) tirada iyo nooca qalabka ay hay'addu rarka u adeegsaneyso sidii loo soo daabuli lahaa xashiishadda iyo waxyaabaha cannabis-ka la isugu gudbinayo;
(12) qorshooyinka rarida, rarida, iyo dejinta;
(13) qeexitaan khibrada codsadaha ee qeybinta ama ganacsiga amniga;
(14) aqoonsiga qofkasta oo leh dano dhaqaale ama cod bixin ah 5% ama in ka badan hay'adda gaadiid raaca marka loo eego shatiga la raadinayo, ha ahaato aaminid, shirkad, shuraako, shirkad deyn xadidan, ama lahaansho kali ah, oo ay kujirto Magaca iyo cinwaanka qof walba; iyo
(15) wixii macluumaad ah ee kale ee xeerku farayo.
Waaxda Beeraha ayaa ku abaalmarin doonta liisanka Hay'adaha Gawaarida Cannabis ee ku yaal Illinois, nidaamka dhibcaha. Dhibcuhu wuxuu ku salaysnaan doonaa sida saxda ah ee loo abaabulay dalabku, iyo sidoo kale, iyo tayada jawaabaha laga helo macluumaadka loo baahan yahay.
Ururka dhibcaha 85% iyo ka badan oo buuxiya dhammaan shuruudaha laysanka gaadiidka waxaa lagu siinayaa laysan 60 maalmood gudahood markii la soo diro codsigooda.
Mar alla markii urur helo rukhsad, dhammaan macluumaadka lagu heli karo dalabka, oo ay ku jiraan qorshayaashiisu, waxay noqon doonaan xaalad khasab ku ah rukhsadda. Ka gaabinta inaad u hogaansanaato waxay ku qasbi kartaa ficil edbin ah oo ay kujirto kala noqosho liisanka.
Ururada u qalma shatiyada ayaa sidoo kale laga rabaa inay bixiyaan $ 10,000 ka hor inta aysan helin liisankooda. Lacagtaan waxaa lagu shubaa Sanduuqa Xeerarka Cannabis.
Qaybta 40-20 ee qawaaniinta cannabis iyo sharciga canshuuraha wuxuu sheegayaa in dalab ay sameysay Hay'ada Gawaarida Gawaarida ee Illinois waa la diidi karaa haddii;
(1) Codsi ma soo gudbiyo dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay
(2) Codsi ayaa ku guuldareysto inuu u hoggaansamo sharciyada soonaha ee deegaanka ama shuruudaha oggolaanshaha
(3) Xubin kasta oo ka mid ah guddiga ama mas'uuliyiinta guud ayaa ku xadgudba shuruudaha ururka
(4) Saraakiisha sare ama xubnaha guddiga ee ururka waxay ka yar yihiin 21 sano
(5) Codsi waxaa ku jira macluumaad been ah
(6) Sarkaalka sare, liisanka, xubin guddiga, ama xubin leh daneyn maaliyadeed ama cod bixin ah 5% ama in ka badan shatiga, waa ku xaddidan gudbinta canshuurti kasta ama bixinta lacag kasta oo lagu leeyahay Gobolka Illinois.
Shuruudaha Ururka Gaadiidka iyo Mamnuucista
Dhammaan gaadiidleyyaasha shatiga leh waxaa looga baahan yahay inay;
(1) Waa inaad haysataa habraacyo maareynta hayadda oo lagu daray nidaamka kormeerka agabka
(2) Kaliya xashiishadda cannabis ama waxyaabaha cannabis-infused lagu geeyo xarunta wax-soo-saarka, xarun tijaabo ah, baayac-mushtar, hay'ad fidinaysa, ama si kale oo sharcigu oggol yahay.
(3) Qor dhammaan xashiishadda cannabis ee la dhoofiyay oo ku rid weel xashiishad markii gaadiid la qaadayo
(4) U warbixi luminta ama xatooyada mas'uuliyiinta muddo 24 saac gudahooda ah markii la ogaadey midkoodna, taleefan ahaan, shaqsi ahaan ama qoraal ahaan.
(5) Ka ilaali qof kasta oo ka yar 21 jir baabuurta qaada xashiishka
Qaadashada Kaarka Aqoonsiga Wakiilka
Wakiillada gaadiidku waxaa looga baahan yahay inay lahaadaan kaararka aqoonsiga wakiilka si ay ugu shaqeeyaan hay'ad gaadiid oo kasta oo ku taal Illinois.
Kaarka aqoonsiga wakiilka waa inuu lahaadaa;
(i) Magaca wakiilka
(ii) Taariikhda la Bixinayo iyo Dhamaadka
(iii) Lambarka aqoonsiga khaaska ah (waa inuu lahaadaa 10 nambar)
(iv) Sawirka qofka sita
(v) Magaca sharciga ah ee shirkadda xamuulka ee loo shaqeeyaha wakiilka u yahay
Marka laga hadlayo kaarka, waaxda waxaa loo xilsaaray;
(1) Go'aaminta macluumaadka laga heli karo foomka dalabka
(2) Xaqiiji macluumaadka foomka codsi oo oggolaado ama diido dalab 30 maalmood ka dib soo gudbinta
(3) Bixinta kaararka Aqoonsiga wakiilka 15 maalmood kadib marka la oggolaado
(4) U oggolow isticmaalka elektiroonigga ah iyo xaqiijinta soo gudbinta
Sharcigu wuxuu u baahan yahay wakiillada inay sii hayaan kaararka aqoonsigooda inta ay ku sugan yihiin dhismaha meheradda ganacsiga cannabis. Waxaa sidoo kale looga baahan yahay inay ku soo celiyaan kaararka aqoonsiga hay'adda markii qandaraaskooda shaqo uu dhacayo ama la joojiyo. Haddii kaarku lumo, wakiilka waa inuu si dhakhso ah ugu wargaliyaa Waaxda Boliiska Gobolka iyo waliba Wasaaradda Beeraha.
Baadhitaanada Aasaasiga ee Ururka
Gobolka Illinois wuxuu u baahan yahay in baaritaanka asalka lagu sameeyo dhammaan saraakiisha mustaqbalka, xubnaha guddiga, iyo wakiillada hay'adda gaadiidka ka hor intaysan ururku soo gudbin arjiga codsigiisa liisanka koowaad.
Baadhitaanka waxaa lagu samayn doonaa Waaxda Booliska ee Gobolka. Saraakiisha mustaqbalka dhow, xubnaha guddiga, iyo wakiilada waxaa looga baahan doonaa inay dhiibaan faraha inay iska baaraan.
Hay'adaha waxaa looga baahan doonaa inay bixiyaan khidmada baarista taariikhda dambi, taas oo la siin doono sanduuqa adeegga booliiska gobolka.
Cusboonaysiinta Liisanka Hay'adaha Gaadiidka iyo Kaararka Aqoonsiga Wakiilka.
Liisamada gaadiidka qaada iyo kaararka aqoonsiga wakiilka ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa sanad walba marka ay dhacayaan. Waaxda Beeraha ayaa ku siin doonta ogeysiis qoran ama elektiroonig ah oo ku saabsan dhicitaanka, 90 maalmood ka hor maalinta dhicitaanka.
Hay'adaha Gawaarida Cannabis ee Illinois waa inay filayaan inay helaan cusboonaysiintooda 45 maalmood ka dib markay sameeyaan codsi cusboonaysiin haddii;
(1) Waxay bixiyaan khidmad dib-u-cusboonaysiin aan la celin karin oo $ 10,000 $ oo lagu shubayo Sanduuqa Xeerarka Cannabis
(2) Ruqsadda hay'adda lama laalin ama laga joojineyn inay jabisay sharci kasta
(3) Ururku wuxuu u hawlgalay sidii qorshooyinka loo dejiyey oo qayb ka ah dalabkiisa ama wax ka beddel lagu sameeyey qorshaha oo ay oggolaatay Waaxda Beeraha.
(4) Hay'addu waxay soo gudbisay warbixinno kaladuwan sida ay wasaaraddu u baahan tahay
Hay'adaha gaadiidka ee ku guuldaraysta inay cusbooneysiiyaan liisanka shatigooda kahor taariikhda dhicitaankooda ayaa joogsanaya inay fuliyaan howlo ilaa ogolaashadooda la cusbooneysiinayo. Shirkad kasta oo sii wadata inay shaqeyso ka dib markay dhacaana shatiyadooda waxaa laga qaadayaa ciqaab.
Wakiillada kaararka aqoonsigooda waqtigiisu dhacayo ayaa sidoo kale laga filayaa inay cusboonaysiiyaan. Wakiilladaas oo ku guuldaraysta inay u hoggaansamaan looma ogolaan doono inay u shaqeeyaan hay'ad gaadiid xashiish oo ku taal Illinois. Hadday sameeyaan, iyaguna waa la ganaaxayaa.
Hay'adaha ama wakiillada ka xaraysana xereynta canshuur celinta ama bixinta lacagta lagu leeyahay Gobolka Illinois lama cusbooneysiin doono shatiyadooda.
Haddaad rabto inaad ka hesho ruqsad ururinta gaadiidka xashiishadda ama wakiilladaada, waxaad u baahan tahay inaad wacdo qareenka cannabis si lagaaga caawiyo.